Garashadii Dibjirtay. W/Q; Cabdirisaaq Maxamed Barkhad.
Wednesday, 22 March 2017 19:22
Nin la odhan jiray Faahiye oo muddo dheer deganaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa lahaa oori wanaagsan iyo caruur dhowr ah. Faahiye waxa uu ahaa nin daacad ah oo ku fiican dhinaca cibaaddada diinta Islaamka, shanta salaaddood ee waajibka ah ayuu oogi jiray, soonka ayuu ilaalin jiray sadaqaddana wuu la bixi jiray, waalid adeec buu ahaa xushmada iyo xaq dhawrka aadamuhu ku leeyahay ogsoon, oo garasho waafiya u leh sida loo xidhiidhiyo qaraabadda.
Faahiye waxa kale oo uu ahaa nin kaftan badan oo furfuran oo weliba shaqeysta. Inta badana waxa uu ka soo bixi jiray waajibaadka iyo masuuliyada ka saaran reerkiisa iyo carruurtiisa oo uu ku dadaali jiray daryeelka noloshooda. Taas waxa uu ku kasbaday sharaf iyo sumcad uu xurmadooda kaga soocanaa bulshada uu ku dhex nool yahay ee isugu jirtay ajaanib iyo Soomaali.
Ninkii Faahiye waxa uu maalin maalmaha ka mid ah go'aan ku gaadhay inuu u guuro dalka hooyo. Sidaas buu yeellay dabaddeedna halkaas ayuu ka billaabay ganacsi uu gaar u leeyahay iyo nolol cusub. Nasiib darro se bulshadan uu degelkooda u soo diga-rogtay ee waayo hore ugu dambeysay waxa ay badankoodu caado ka dhigteen inay cunnaan geedka cagaaran ee magac ahaan ku caan baxay jaad amma qaad.
Nolosha cusub ee uu dhexda kaga soo dhacay waxay ku keentay mashaakil iyo dhibaatooyin dhowr ah. Sobobta oo ah qof kaste oo arrin ka gallo waxa uu ku odhan jiray "Hawshaas fadhi baan ku dhameyn karnaa", oo macnaheedu yahay jaad soo qaad kadibna waan wada fadhiisanaynaa si aan arrintaas u gorfeyno unna gun gaadhno.
Ninkii Faahiye ee dhaqanka wanaagsan lahaa qaadka iyo quudkiisa aqoon uma lahayn'e maalintii uu dhadhamiyey ayaa laga hoos raacay illaa uu jaadka cunistiisa ka qabatimay oo uu labada daan ba ku cunay kadibna muqayil weyn uu noqday. Nasiib darro masaajid uu gallo iyo cibaado way kala dhaqaaqeen haddii uu salaada la adimayo maqlana meesha uu fadhiyo ayuu garaabada iska hor xaadhi jiray markaas buu tukadaa Salaad takbiirta atixiyaad uu akhrinayo sujuudana faataxada uu ku khaldayo maxaa yeellay?, waa masakax hawlan oo mirqaansan misana hawada sare heehaabaysa oo fallaadhaha fekerkeedu ku dul qotomo dar aan faa'iido u lahayn danta dadnimadiisa.
Ugaas bokhran baad ahayd’e
Irdaha noloshaad ahayd’e
Ilayska dhulkaad ahayd’e
Asaayo maxaa ka beermay
Halkaad ku lahayd astaanta
Maxaa umal soo fadhiistay
Maxaa gudcur soo af yeeshay
Naftaada markaad illowday
Bal soo tiri aafaddaada
Wixii lumay aynabkaaga
Bal daawo inkaarahaaga.
Faahiye oo reerkiisu wanaag iyo wakhti hore inuu soo hoydo uga barteen ayaa billaabay in uu habeen badhka yimaaddo isaga oo ooridiisii sugayso. Markuu guriga soo galana, shaadhka uu xidhan yahay inta uu gidaarka u dhow ku garab tuuro ayuu caday dheer qaataa oo uu kaabada dibada fadhiistaa. Si uu u qaato laydha iyo neecowda macaan ee ka dhacaysa ardaaga guriga. Naftiisa ma xisaabiyo oo isma weydiiyo reer baad saaka ka baxday'e tallow maxaa kaa dambeeyay oo soo kordhay?
Meeshaas uu fadhiistay ayuu waaberiga ka kacaa, oo uu sariirta jiif u dul tagaa illaa saacadu ka gaadhayso qaddada duhurka ayuu khuurada hurdada kala horaa. Caruurtii uu dhalay dhowr billood ismay arag sobobta oo ah isaga oo jiifa ayey aroorta hore dugsiga u jarmaadaan, iyaga oo hurdana wuu soo hoydaa waana nolol is-dhaafsan. Aabbihii ay caruurtu yaqaanneen ee garab joogiisu ku badnaa aragtidiisii baa ku adkaatay, oo indhahoogii baa abaaday.
Dugsiga marka ay ka soo nawaxaan haddii ay arkaan isaga oo soo jeeda, oo ay wax weydiiyaan dirir iyo cannaan indho la' ayuu kula dul dhacaa waayo?, naftiisu weli waxa ay dareemaysaa diiqad maskaxdiisuna waa mid daalan.
Ragoow ubadkaaga jooga
Dhashiina ku aabbo weyday
Asmay ku calool galeen’e
Ammaanada boodhka taalla
Ragoow olollaynta Jaadka
Haddaad kaga ood fogaatay
Maxaa arrin kuu dambeeya?
Faahiye oorida uu qabo way ugu taag wayday in uu dhaqankiisii hore iyo dabeecadiisii fiicnayd dib ugu soo noqdo, waxaana ay duruuftu ku qasabtay inay sidaas ku samirto oo ay duudka sare ku sidato doqoniimadiisa dayacan maadaama uu Eebbe dhexdooda ka beeray carruur tiro badan.
Markay ajashaada gaadho
Cidinna kuu ooyi mayso
Ilaahay ka dhuuman maysid
Jannada ku aroori maysid
Cadaabta ka oolli maysid
Godkaaguna waa aboor
Abeesiyo waa ciqaab.
Rugtii ganacsiga ee uu Faahiye furayna waxa ku dhacay dhaqaale burbur kadib markii uu hantidii dhex taallay ka dhigay meel wax laga qaado mooyaane wax dib loo celiyo aanu jirin.
Waayeelku hadduu ab guuro
Hadduu la ambado xilkiisa
Asluubkiyo xeerka soohan
Hadduu wacadkiisa iibsho
Iimaanka hadduu xaraasho
llaahay ka yaabbi waayo
Ku daalka abaabulkeeda
Ujeeddo ka keeni maayo!
Faahiye marka uu qaadka cunayo waxa uu ka mid ahaa dadka ku qayla labo falaas oo shaah bigays ah oo weliba macaan dartood halka ay yaallaan qudhaanjadu ku dul wareegto iyadda oo wayraxan. Maalintii dambe ayaa ninkii Faahiye ahaa uu aad u xannuunsaday oo meeshii uu jaadka ku cunayey ku dhacay waxa loolla cararay dhakhtarka weyn markii baadhitaan caafimaad lagu sameeyayna waxa laga helay dhiig-kar iyo macaan. Dhakhtarkii waxa uu u sheegay inuu joojiyo cunista jaadka iyo fadhiga badan isaguna hadalkaas digniinta ah dhag uma dhigin, ee halkii hore ayuu howlaha ka miisay.
Haddaanay astaan lahayn
Ammaaniyo qawl lahayn
Asluub iyo dhaqan lahayn
Ishaaro xun baa qarsoon.
Maalintii dambe ayaa isaga oo mirqaasan mallakul mowdkii dul yimi, kadibna nafta laga siibay. Taas oo keentay in isaga oo mayd ah calyadii jaadka laga soo guro canka afkiisa. Murti hore oo Soomaaliyeed baa halku-dhageedu ahaa "Qudha oo kaa baxdaa dhaanta, nolosha qaarkeed."
More in this category: « Qabyaaladda: Cudurka Soomaalida dulleeyay. Liiska Qandaraasyada aan loo tartamin ee Qaleylka lagu qaybsaday dhawaan iyo Dagaalka Dhaqaale ee Dekeda Berbera iyo Free Zone keeda ka bilaabmay. qalinkii Fidhinle UK »